CUDURRADA IYO CAYAYAANKA EE BALSAM: APHID, SAX AH, SAXDA AH, IYO KHATARO KALE OO KHATAR GALINAYA XAYAWAANKA, IYO SIDOO KALE SAWIRADOODA, SHARAXAADA IYO SIYAABAHA DAGAALKA - GURI, GURI
Liiska cudurada waaweyn iyo cayayaanka oo khatar ku ah balsamine. Sababaha iyo xakamaynta tallaabooyinka
Ubaxyo dhalaalaya, caleemo cagaaran oo qurux badan, muuqaal qurux badan - balsamadu waxay soo dhaweeyeen dadka wakhti dheer soo dhaweynaya dadka daaqadaha daaqadaha, guntgias iyo sirqoollada beerta. Geedka midabka leh wuxuu u baahan yahay daryeel fudud, kaas oo ka jawaabaya ugxan-yari cusub iyo buro iftiinka caleemaha. Laakiin xitaa geedkan aan qabin waxa uu dhaawac u geysan karaa ama waxaa ku dhici kara dulin.
Cayayaanka cayayaanka ayaa faragelinaya horumarka caadiga ah iyo koritaanka dhirta quruxda badan. Waxay ku saabsan tahay cayayaanka oo dhibaateeyn kara fungus-balsamic lagu falanqeyn doono maqaalkeena. Sidee loola tacaali karaa cayayaanka dhibta leh iyo tallaabooyinka ka hortagida si looga hortago muuqaalkooda.
Soo saarista dhirta indoor-ka ee cudurada kala duwan
Sababta ugu weyn ee daciifinta xayawaanka cagaaran, xoqida iyo jaranjarada ayaa ah xaalado aan habooneyn ama daryeel la'aan. Balsam daciif ah ayaa u nugul tiro badan oo cudurro ah, sidoo kale waa cayayaanka fudud ee cayayaanka kala duwan.
Magaca labaad ee warshadda waa Roly Wet. Tani waxay sabab u tahay kor u kaca dhaqanka qoyaanka. Caleenta iyo cayayaanka waa 50% biyo. Balsam wuxuu jecel yahay ciidda qoyan iyo hawada. Kuwaasna waa xaalado ku habboon muuqaalka jirrada. Guriga xannaanadu wuxuu si gaar ah ugu nugul yahay cudurada soo socda.
Qanjiraha Downy. Pathogen - fungi (wuxuu googooyaa qaybaha cagaarka leh qoyaan). Caleemaha waxaa lagu daboolay ubaxyo caan ah, waqti ka dib, saxanka caleen ayaa madow iyo dhacaya (baro sababta caleemaha u dhacdo iyo xanuunka iyo sida loo badbaadiyo ubaxa, waxaad ka baran doontaa halkan). Fungicides waxay ku haboon tahay daaweynta (Vitaros, Baktofit).
Qamadi ciriiri. Sababta keenta bakteeriyada ka timaadda carrada ama biyaha. Calaamadaha - patina caleemaha iyo dhibco cagaaran. Daaweyntu waxay ku haboon tahay in lagu buufiyo faleebo ama Fundazole.
Bacteriosis Dhibaatooyinka biyaha ayaa ka muuqda caleenta, kadibna waxay saameynayaan baadiyaha oo dhan. Xakameynta Cudurada - Ka saarida qaybaha la taaban karo iyo daaweynta Bordeaux isku dar ah.
Ku saabsan sababta balsam qolka u dhaco burooyinkeeda iyo ubaxyada, maxay yihiin siyaabaha looga hadlo iyo tallaabooyinka ka hortagga, akhri maqaalkayaga.
Khatarta ugu weyn: sawir, ogaanshaha iyo hababka loo maareynayo iyaga.
On cuthta qolka cagaaran caadi ahaan dhirta ka heli - cayayaanka yaryar oo ku quudin on casiir. Thrips, whiteflies iyo aphids waxay sidoo kale halis u yihiin balsam. Xaalado dhif ah, nematodes iyo sciarides waxay ka muuqdaan baadiyaha.
Calaamadaha caarada caarada caarada ayaa la ogaan karaa.fiirinta dhabarka xaashida ama internode. Tilmaamaha muuqaalka:
filim khafiif ah oo duuban xaashida;
dhibco yaryar oo ku yaal saxanka warqadda;
cagaarka ayaa lumiya iftiinkooda;
ubaxu wuxuu lumiyaa xoogaa, burooyinkeeda yaryar, ubaxyadu way baxsadeen.
Caawimaad! Caarada cirridku waxay bilaabi kartaa balsam. Marka cudurka qabaa, caleemaha yar yar, burooyinkeeda iyo caleemaha ayaa loo yaqaan 'deformed'. Balsam ayaa ku dhinta kobcinta kobaca, wuu dhinto. Astaricid kasta sida Apollo, Demitan, Neoron, Sunmite iyo kuwo kale ayaa ku haboon dagaalka.
Sababaha shilku waa kulaylka iyo hawada qallalan ee qolka. Dagaalku wuxuu ka kooban yahay talaabooyin taxane ah oo taxane ah.
Qaybaha dhaawacan ee trim.
Si loo xaliyo saabuunta qashinka. Ku dabool biyo ama saabuun, xumbo. Codso xumbada soo saarta dhirta 5-7 daqiiqo, kadibna biyo raaci.
Kala shaqeynta kiimikada. Vermitek iyo Fitoverm ayaa ku habboon. Qiyaasta waxaa lagu muujiyay tilmaamaha.
Calaamadaha caabuqa geedka ayaa aad u adag in la tixgeliyo. Laakiin derbiyada dheriga waxaa jiri doona aragtiyo kala duwan oo ah buulalshaha mulkiilaha ee huurada. Aqoonsiga aphids ee balsam wuxuu noqon karaa marka baarista xididka ama inta lagu jiro tallaalka.
Khatarta cayayaanka waa in ay nuugaan soodhaha geedka caleenta. Sababtaan awgeed, isbeddelkoodu wuxuu dhacaa, koritaanka joogtada ah. Nidaamka photosynthesis ayaa la gooyey ama la joojiyay, natiijo ahaan - balsamku ma kiciyo oo dhinto. Sida loo wajaho aphids:
Hawlaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah
Kala saarista burbur, burbur jaban
Balsam ayaa u wareejisay dhul cusub.
Raashinka muusiga ee lagu buufiyo Waxyaabaha ay ka kooban tahay:
Si aad u qaadato qaybo isku mid ah (1 st.l). Ku shub biyo karkaraya, ku adkeyso 12 saacadood. Isticmaal mashiinka. Caanaha si looga hortago dib-u-dhac infekshanka leh boodhka, boodhka tubaakada.
Kiimikooyinka Daroogooyinka ku habboon:
Qiyaasta iyo isticmaalka waxay kuxirantahay cabbirka balsam (eeg tilmaamaha). Kahor daaweynta kiimikada, ciidda waa in lagu daboolaa filim.
Aphids ku dhalid carrada qalalan. Sababta muuqaalku waa biyo aan joogto ahayn oo aan caadi ahayn.
Cayayaanka waxay u egyihiin god yar oo cad. Cayayaanka ayaa caleemaha ku xajinaya dhinaca dambe ee caleenta, ka dibna digaagga ka soo baxa, kaas oo cuni kara duurka balsam oo dhan. Waqti ka dib, maqaarka dirxiga ayaa adkeynaya, tani waxay ka dhigeysaa mid aan la isku hallayn karin tallaabada diyaarinta kiimikooyinka qaarkood. Si loo baabi'iyo shakhsiyaadka, dib-u-daweyn ayaa looga baahan yahay mudo ah 5-6 maalmood.
Digniin! Whitefly ayaa sii deynaya dareeraha sonkorta leh ee dhajinta leh kaas oo ku jira barkin shimbireed.
Calaamadaha weerarka - caleemuhu way lumiyaan cagaarka cagaaran, dhibco huruud ah waxay u muuqdaan iyaga, waxay qallalaan oo ay u dhacaan si weyn (waxaad ka baran kartaa sababta caleemaha u noqdaan huruud ah qolka qolka iyo sida loo dhajiyo geedka). Sababaha ku dul-noolaashaha waa hawo diiran, qoyan iyo dabayl.
Sida looga hortago cayayaanka:
Mechanical. Ukumaha Whitefly waxaa lagu dhaqi karaa biyo. U demi labada dhinac ee saxanka warqadda.
Ka saarida qaybaha qaniinyada.
Xakamaynta cayayaanka ee cayayaanka: Malathion, Actellic, Tanrek. Kuwani waa diyaargarow sunta ah oo kaliya oo laga shaqeyn karo hawada (balakoonka, wadada).
Kala duwanaanta kiimikada waa tincture toon. 1-2 xabbo si ay u jejebiyaan dhismaha gruel, ku shub biyo karkaraya, ka baxo 2-3 saacadood. Duuji kayn 2 jeer maalintii
Khatarta waxay ku jirtaa 2 arrimood: daciifinta baadiyaha iyo infekshanka suurtagalka ah ee fayruuska maskaxda (thrips waxay qaadaan jirrooyinka). Waxaad ku ogaan kartaa dhibaatada adiga oo ogaanaya isbeddelka caleenta dhalinyarada ah ee caarada iyo isbedelka barta kobaca. Cidhifyada caleemaha qallalan, ee bartamaha dhaqdhaqaaqa la ogaan karo ee cayayaanka khatarta ah.
Waa muhiim! Thrips ayaa u muuqda ciidda wasakheysan. Waxa kale oo aad soo saari kartaa cayayaan leh bouquet of ubax, waxaa sidoo kale lagu dari karaa daaqad furan. Dagaalku wuxuu ku jiraa daaweynta baadiyaha leh sunta cayayaanka.
Tanrek 1 ml halkii 5 litir oo biyo ah ama 2 ml 10 litir oo biyo ah.
Actellic. Isticmaal infekshan culus. 1 dhalada daroogada 1 litre oo biyo ah.
Ku celi kharajka 5-6 maalmood ka dib.
Xumbo iyo kaneeco
Podroe - dhoobo dhoobo ah. Waxay ku dhow yihiin ma waxyeelo, ku nool ciidda, ku quudin arimaha organic. Poduns ayaa halis u ah geedo iyo gooyn: gogol xoqan. Waad ku ogaan kartaa markaad waraabinaysid, sababtoo ah shakhsiyadu waxay bilaabaan inay boodaan.
Sciarides ama kaneecada musqusha ayaa ah mid yar oo madow. Khatarta ugu yar ee dhirta. Dirxiga waa caddaan, madaxoodu waa madow. Sidoo kale dhaawici nidaamka xididka dhirta daciifka ah ama yar yar.
Sababta muuqaalka muuqaalka cayayaankaasi waa mid caadi ah - waraabin xad dhaaf ah. Waxaad hoos u dhigi kartaa dadka adoo ku qallajinaya dhulka dusha. Dhamaadka burburinta dhulka waxaa lagaa rabaa inaad ku darto daroogada daroogada 2.
Nidaamka ugu muhiimsan ee ka hortagga waa daryeel ku habboon. Wixii macmacaan ah, waxaa lagugula talinayaa inaad barato talooyinka la soo bandhigay, taas oo fududeyn doonta daryeelka iyo qorista qoraalka.
Balsam waxay u baahan tahay qoyaan. Waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah u waraabiyo baadiyaha. Si looga hortago bogga carrada ee dheriga waxaad u baahan tahay inaad sameysid dheecaan wanaagsan. Waxaad ka qaadi kartaa qumbaha, quraarada, vermiculite iyo waxyaabo kale si aad u doorato.
Marka biyaha lagu buufiyo waa inaysan marin qaybaha cagaaran, midabada.
Samee quudinta si ka fiican xilliga dayrta. Bacriminta waa inay ku jiraan fosfooraska iyo nitrogen.
Warshadu waa inay hesho qorrax ku filan.
Xilliga qaboobaha, dib u habeyn dheriga balsam meel qabow ah (15-17 digrii), yaree tirada biyaha.
Xilliga guga, jiid jeexan dhalinyaro iyo gabow oo aan korin oo ha siin ubax (ku saabsan sababta balsam uusan ujin, sidoo kale talooyin ku saabsan daryeelka iyo beerashada, halkan ka akhri).
Balsam - riwaayad caan ah oo leh midabo dhalaalaya iyo cagaar cad. Waxay leedahay qoyaan aad u sarreeya. Xaaladahaas oo kale, cudurrada fangasku waxay horumarin karaan. Daryeel aan fiicnayn ayaa daciifiya geedkan, waxayna noqoneysaa bartilmaameed cayayaanka. Tikidh, rikoodhyo, cadaan, cadaanyo, xayawaanku wuxuu ku faafi karaa balsam. Waxaad ka tirtiri kartaa iyaga oo gacan ka helaya acaricides (loogu talagalay shilinta) iyo sunta cayayaanka.